चम्पादेवी गाउँपालिकालाई देशकै नमुना पालिका बनाउँछौं : अध्यक्ष नवराज के.सी. - Ankuran Khabar
चम्पादेवी गाउँपालिकालाई देशकै नमुना पालिका बनाउँछौं : अध्यक्ष नवराज के.सी.
२०७७ मंसिर २४0
लामो समय पछि स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पायो । जनप्रतिनिधि आए पश्चात संघीयताको मूल मर्म अनुरुप जुन रुपमा विकास निर्माण हुनुपर्ने हो त्यो अनुसार जनताले अपेक्षाकृत विकासको अनुभूत गर्न पाएनन् । स्थानीय तहमा भ्रष्टचार बढी भयो भन्ने गुनासा पनि धेरै सुनिन्छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा आउने समस्या, समधानका उपाय ,संघ र प्रदेशको सहयोग, विकासको समग्र योजना लगाएतका विषयमा केन्द्रित रहेर अंकुरण खबरका लागि अनिता मगरले ओखलढुङ्गा जिल्लाको चम्पादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज केसीसंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश…
तपाई गाँउपालिका अध्यक्ष भएको तीन वर्ष पुरा भैसक्यो,यस बीचमा जनता प्रतक्ष्य लाभान्वित हुने केके काम गर्नु भयो ?
म निर्वाचित भईसकेपछि सबै भन्दा पहिले यहाँका हरेक टोल बस्तीहरुमा बाटोघाटो पु¥याउने काम भएको छ । पालिका बासीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् । खाने पानीको अत्यन्तै आवश्यक भएको ठाउँमा खानेपानीको व्यवस्था गरेका छौ । शैक्षिक,खेलकुद क्षेत्रको विकास र विस्तार गरिएको छ । जेष्ठ नागरिक,अपांग,एकल महिला, टुहुरा बालबालिकाको सहजताको लागि आवश्यक्ता अनुरुप कार्यक्रम गर्ने गरेका छौं । एक घर एक धारोको सुविधा धेरै घरमा पुगिसकेको छ बाकी ठाउँमा पनि तिव्रतर रुपमा काम भैरहेको छ । यसको साथै हामीले २०७८/७९ सम्ममा चम्पादेवी गाँउपालिकाका सबै घरहरुमा केन्द्रीय विद्युत प्रशारण लाइन पु¥याउने लक्ष्य लिएका छौ ।
चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख भए अनुसार काम गर्न सक्नु भएन भन्ने जनगुनासो छ नी ?
यो सरासर गलत हो, हामीले चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख भए अनुसार नै काम गर्दै आएका छौ । मलाई लाग्छ ७०५३ स्थानीय तहहरु मध्येमा चम्पादेवी गाउँपालिका विकासका हिसावले धेरै अगाडि बढिसकेको छ । विकास निर्माण कार्यमा ओखलढुंगा जिल्लामा चम्पादेवी गाउँपालिका अग्र पक्तिमा छ । हिजो जनताको सामु जुन बचन लिएर, जुन घोषणा पत्रमा उल्लेख भएअनुसारका कुरालाई मैले पुरा गर्दै गएको छु । पहिले गाँउपालिकाको हरेक वडामा केन्द्रसँग जोड्ने बाटोहरु थिएन्, पूर्वाधारका तयारीहरु थिएनन् । तर अहिले सबै वडाबाट पालिका र केन्द्र जोड्ने मोटरबाटोहरु पु¥याएका छौ ।
जिल्लाकै प्रमुख धार्मिक स्थल चम्पादेवी ककनी क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक पूर्वाधारको तयारी हुदैछ । मोटर बाटोहरु बनाइरहेका छौ । हामीले हिजो जनताको अगाडि गरेका प्रतिज्ञा अनुसार नै अगाडि बढेका छौ ।
तपाईको पालिकामा विकास निर्माण कार्यमा होस् या पालिका स्तरीय कर्मचारी भर्ना, सरुवा लगाएतका विषयमा आफ्न्त र पार्टी निकटलाई प्रथामिकता दिएको आरोप लागेको छ के यी आरोप सत्य हुन् ?
म नेपाली कांग्रेसबाट अध्यक्ष जितेको प्रतिनिधि हुँ । पालिकाका जनताले समग्र विकासको लागि योग्य ठानेर नै मलाई अध्यक्षमा जिताएका हुन । अध्यक्षमा चुनिय पछि कांग्रेस मात्र नभएर सबै पार्टी र जनताको अभिभावक हुँ । मेरा हरेक काममा हाम्रालाई नभई दक्ष,योग्य, राम्रालाई प्रथामिकता दिएको छु । यस्ता दक्ष र संक्षम व्यक्ति संघ संस्था कहिले काही आफन्त र पार्टी निकट पनि हुनसक्छन् । यही कुरामा अन्य राजनीतिक दल र केही साथीहरुको असन्तुष्टि हुनसक्छ ।
हामीले खोलेका कुनै पनि विज्ञापन या मागेका कर्मचारीहरु जुनसुकै ठाउँमा पनि स्पष्ट नीति नियम अनुसारनै गरिएको छ । जुनसुकै पार्टीको किन नहोस प्रतिस्पर्धामा जो सक्षम छ, सक्षम व्यक्तिले नै पाउने हो, पार्टीको मतलब छैन ।
स्थानीय तहमा धेरै भ्रष्टचार हुने गरेको तथ्य छ । तपाइकै पालिकामा पनि तपाई विरुद्ध पटक पटक मुद्धा मामिला हुने अवस्था छ, तपाईको स्वेच्छाचारी स्वभावकै कारण यस्तो भएको भन्छन्नी के हो वास्तविकता ?
हो, स्थानीय तह मात्र नभएर जुनसुकै क्षेत्रमा भ्रष्टचार भएकै कारण सोचेअनुकुल विकास हुन नसकेको भन्ने कुरा मिडिया मार्फत पनि धेरै सुनिन्छ । म यो कुरामा सचेत छु की आफ्नो पालिका भित्र भ्रष्टचार हुनै नदिने, यदि कसैले यस्तो अवस्था सृजना गरेमा पालिकामा खबर गर्न पनि सबैलाई आग्रह गर्छु । जहाँ प्रमाण सहित भ्रष्टचार गरेको, जनतालाई दुख दिएको भेटिन्छ त्यही निमय अनुसार कारबाही गरिन्छ ।
अर्को कुरा तपाईले भन्नु भयो की मेरो मनोमानीका कारण पटक पटक मुद्धा मामिला भयो । यो सरासर गलत कुरा हो । केही विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरुले उहाँहरुले भने अनुसार नभएर भ्रष्टचार मुद्धा जिल्ला प्रशासनकार्यलयदेखि अख्तियारमा समेत पटक पटक हाल्नु भएको चै सत्य हो। यो विषयमा छानवीन भइरहेको छ, डकुमेन्ट पठाईएको छ । यदि त्यस्तो भ्रष्टचार गरेको भए उच्च न्यायलयबाट कारबाही भइसक्थ्यो । यो मेरो दीर्घकालसम्मको बिकासप्रेमी सोच, पारदर्शिता र जनभावना कदर गरेकै कारण केही साथीहरुले कसरी नराम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर गरेको प्रपञ्च हो । यस्ता सत्यहीन र भ्रामक कुरामा पालिकाबासीलाई कुनै आशंका छैन् ।
कत्तिपय स्थानीय प्रतिनिधिले स्थनीय तहलाई प्रदेश र संघ सरकारको आवश्यक सहयोग नपाइएकाले विकास गर्न सकिएन भन्ने सुनिन्छ ? तपाईको पालिकालाई संघ र प्रदेशको कत्तिको सहयोग छ ?
हो, यो कुरा चम्पादेवी गाउँपालिकाले पनि अनुभुत गरेको छ । मैले चम्पादेवी गाँउपालिकाको दश वटै वडामा पानीको अत्यन्तै समस्या भएका स्थानमा खाने पानी पु¥याउन डिपिआर तयार गरे । डिपिआर प्रोजेक्ट रिर्पाटलाई प्रदेश सरकार संघिय सरकारसम्ममा पहल गरेर बजेट माग गरे तर अहिलेसम्म कतैबाट पनि सहयोग भएको छैन् । अन्य विषयमा पनि यस्तै छ ।
कोरोनाले आक्रान्त पारेको यो विषम परिस्थितिमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको साथै जनमुखि सेवा प्रवाहमा कसरी अगाडी बढ्नु भएको छ ?
अहिले चम्पादेवी गाँउपालिकामा कोरोना संक्रमित हुनुहुन्न् । ग्रामिण भेगमा त्यहाँको भौगोलिक अवस्था, बस्ती, कम जनसंख्या हुने, स्वस्थकर खानपान र शारीरिक परिश्रम गरिरहने भएकाले पनि होला कोरोना संक्रमित हुनु परेको छैन् । यद्यपी यसैबीचमा पनि हामीले सकेसम्म कोरोना संक्रमणबाट बच्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरेका छौं । आवश्यक स्वास्थका मापदण्ड अवलम्बन गरेका छौं । समस्यामा परेका नागरिकलाई राहातदेखि आवश्यक सहयोग गरेका छौं ।
तपाईको पालिकालाई अन्य पालिकाको तुलनामा पृथक र अनुकरणीय बनाउने के कस्ता भावी योजना छन् ?
चम्पादेवी गाउँपालिकाका विद्युत, खानेपानी र मोटरबाटो मुख्य तीनवटा गौरवका योजनाहरु छन् । प्रत्येक नागरिकले सहज रुपमा खाद्यन,शिक्षा,स्वास्थ,विद्युत, खानेपानी र मोटरबाटोको उपभोग गर्न पाउन भनेर हामी लागिपरेका छौं । यस्तै गाउँपालिकाको चक्रपथ निर्माणको कुराहरु अगाडि बढाएका छौ ।
धार्मिक र पर्यटकीय हिसावले हेर्ने हो भने पनि १ नम्बर प्रदेशकै प्रख्यात चम्पादेवीमाताको मन्दिर हाम्रै गाउँपालिकामा छ । धार्मिक र पर्यटकीय हिसावले अत्यन्तै सुन्दर छ हाम्रो गाउँपालिका। चम्पादेवी मन्दिरलाई विश्व सम्पदासुचिमा सुचिकृत गर्नको लागि आवश्क पुर्वधार विकास गर्न लागी परेका छौ । शिक्षामा एक कक्षादेखि नै अग्रेजी पद्धतीबाट पठन पाठन सुरुवात गर्ने, गुणस्तरीय, व्यावहारीक र प्राविधिक शिक्षा प्रयोगमा ल्याउन कसरत गरिरहेका छौं । कृषिमा आधुनिकीकरण र आत्मानिर्भता बनाएर गाउँपालिकालाई आय आर्जनमा अगाडि बढाउने लक्ष्य अनुरुप काम गरिरहेका छौं ।
यस गाउँपालिकामा रहेका सबै क्षेत्रको उच्चीत व्यवस्थापन गरि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राई पालिकालाई नमुना पर्यटकीय पालिका बनाउने हाम्रो भाबी लक्ष्य रहेको छ । यसका लागि हामीमा रहेका कमी कमजोरी सुधार्दै विकास र संवृद्धिका मुद्धा एकाकर भएर लाग्न पनि म आम पालिकाबासीलाई अनुरोध गर्दछु ।
नेपालमा थप १०५६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १४८३ जना डिस्चार्ज